I-elevator enkulu kumgangatho ophakathi ozimeleyo kwigumbi elizimeleyo kumgangatho wesihlanu ngaphandle kweLingding Island Sea Diary Boutique B&B, kufutshane nepier, ulwandle, imarike yokutya kwaselwandle, ichibi leminerali, ukujonga ukutshona kwelanga, indawo ecocekileyo nekhuselekileyo. - I-Airbnb
I-elevator enkulu kumgangatho ophakathi ozimeleyo kwigumbi elizimeleyo kumgangatho wesihlanu ngaphandle kweLingding Island Sea Diary Boutique B&B, kufutshane nepier, ulwandle, imarike yokutya kwaselwandle, ichibi leminerali, ukujonga ukutshona kwelanga, indawo ecocekileyo nekhuselekileyo.
U舒琳 unezimvo eziyi-58 zezinye iindawo.
Hai's Diary Boutique Homestay Wailinging Island Elevator high-rise ulwandle view double bed, enebalcony enkulu kufutshane nesanti beach pier Lingding Bay ibhulorho yearch, indawo yokugcina imithwalo, izinto zangasese ezibonelelweyo, lukhetho lwakho lokuqala lokuhamba.
Indlu imi kumbindi weSiqithi saseLingding, umgama wokuhamba imizuzu emihlanu ukusuka kwi-harbor pier kunye nemarike yokutya kwaselwandle.